Princess Villainous - BILAASH WEBTOON ONLINE
Princess-ka boqoradda Celceliska 4.8 / 5 ka mid ah 4
Maalin maalmaha ka mid ah waxaan u wareegey jirka 'violet', dabeecada muuqaalka sheeko ee "Gaando." Violet wuxuu lahaa waji qurux badan, maal, iyo xitaa boqorad! Waxay ahayd qof dumar ah oo wax walba haystay. Nolosheeda waa baaba'ay markii ay eryanayeen hal shay oo aysan haysan - jacayl. Hadda oo aan ahay iyada, waan baddali karaa masiirkeeda sababtoo ah uma baahnin jacayl! … Laakiin maxay jilayaasha sheekada u bilaabeen inay isbedelaan waligood markaan go'aansado taas?
Cutubka 40 February 21, 2021
Cutubka 39 February 14, 2021
Cutubka 38 February 8, 2021
Cutubka 37 February 1, 2021
Cutubka 36 January 26, 2021
Cutubka 35 January 19, 2021
Cutubka 34 January 12, 2021
Cutubka 33 January 4, 2021
Cutubka 32 December 28, 2020
Cutubka 31 December 22, 2020
Cutubka 30 December 12, 2020
Cutubka 29 December 7, 2020
Cutubka 28 December 2, 2020
Cutubka 27 November 26, 2020
Cutubka 26 November 19, 2020
Cutubka 25 November 13, 2020
Cutubka 24 November 9, 2020
Cutubka 23 November 2, 2020
Cutubka 22 October 21, 2020
Cutubka 21 October 15, 2020
Cutubka 20 October 8, 2020
Cutubka 19 October 1, 2020
Cutubka 18 September 22, 2020
Cutubka 16 September 10, 2020
Boqoradii Ganacsadaha Dhiigleyda iyo Qaabkii Xoog ee Ninka Qabow